OVERWOLF FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Overwolf - gbasaa ohere nke egwuregwu site na ịtinyekwuo interface. Site na mmemme a, ị nwere ike iji ihe nchọgharị na nkata na netwọk mmekọrịta n'oge egwuregwu. E nwekwara ụlọ ahịa ngwa ngwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eme ka egwuregwu ahụ dịkwuo mfe.
Mgbe ibudata Overwulf na kọmputa, a na-atụ aro ịdebanye aha. Ị nwere ike ịzọ ụkwụ a ma ọ bụrụ na ịnweghị ịzụta ngwà dị na ụlọ ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta na Overwolf AppStore, ịkwesịrị ịmepụta profaịlụ onwe gị. Maka ndị nwere akaụntụ, enwere bọtịnụ na ala "Banye".
Iji nweta ọrụ a, ịkwesịrị ime ntọala ndị ọzọ. Enwere ike ịhọrọ ebe ị ga-echekwa vidiyo ahụ, ịnwere ike inye ikpo ọkụ dị iche iche ijikwa ndekọ, dezie ndokwa ndị ọzọ iji gboo mkpa gị. Ị nwere ike ịdekọ ọ bụghị naanị vidio, kamakwa weghaara nseta ihuenyo.
Maka ọrụ ngwa ngwa na igodo igodo na-ekpo ọkụ. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ike ịhazi ma ọ bụ nkwarụ. E nwekwara nkwarụ zuru ezu niile hotkeys. Biko mara na mmemme ahụ na - arụ ọrụ na TeamSpeak. Na nchịkọta nhọrọ a, ị nwere ike ịhazi ụzọ mkpirisi keyboard maka TimSpik.
FPS gosipụtara na egwuregwu
Na otu ebe, i nwere ike soro ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba na otu egwuregwu. Na ntọala, ị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ na ihuenyo iji gosipụta ọnụahịa FPS. Ịnwekwara ike ime ma ọ bụ gbanyụọ njirimara a ma kenye igodo dị ọkụ iji chịkwaa.
Mgbe ịmalitere egwuregwu na nlekota nlekota nke ọ bụla ga-egosipụta na ebe ị kwuru na ntọala.
Ị nwere ike ijikwa arụmọrụ niile site na wijetị ga-egosipụta na desktọọpụ. Site n'ebe ahụ ị nwere ike ịga na ntọala, ịzụ ahịa, mepee TeamSpeak. Enwere ike ịchekwa wijetị ma ọ bụ kwaga ebe ọzọ na desktọọpụ, ma ọ bụrụ na ịchọọghị ebe a.
Ị nwere ike ịmepụta wijetị ọzọ ma debe ha na desktọọpụ gị. Ọ nwere ike ịbụ ịmepụta TeamSpeak, akpụkpọ anụ ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Egwuregwu niile awụnyere, plugins ndị ọzọ zụrụ n'ime ụlọ ahịa, na akpụkpọ anụ nwere ike ịchọta n'ọbá akwụkwọ. Mgbe ị na-aga ebe ahụ, mgbe ị wụnye usoro ihe omume a, a ga-eme nyocha, na egwuregwu na ngwa ndị ahụ ga-adaba na ndepụta a. I nwekwara ike na-agba ọsọ ha site na ebe a. Ọ bụrụ na ndepụta ahụ dị ukwuu, ị nwere ike iji ọchụchọ ahụ, ma ọ bụrụ na ejikọtaghị egwuregwu ahụ n'oge ịgụ isiokwu, mgbe ahụ, a ga-eme nke a na aka.
Ọtụtụ akpụkpọ anụ nwere nnwere onwe ma wụnye kọmputa ngwa ngwa. Ị nwere ike ịchọta ha na ụlọ ahịa, n'ihi na a na-ekenye ha ngalaba nkewa. Enwere ihe mkpuchi site na ndị mmepe na ndị nke òtù nke otu obodo na-eme egwuregwu. Enwere ike ịhazi ha.
Họrọ akpụkpọ ahụ chọrọ ma gaa na peeji ya iji hụ ọdịdị ahụ. Na ala, a ga-edepụta ihe niile a ga-anọchi anya, a ga-egosipụta ọdịdị ha. Mgbe ị wụnye ihe mkpuchi ahụ, ọ dịghị mkpa ka a malitegharịa ihe omume ahụ, a ga-emelite ihe niile, ma ị nwere ike ịgbanwe akpụkpọ anụ site na wijetị ma ọ bụ ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na gị na Overwolf na-agbanye, mgbe ịpụsịrị egwuregwu ahụ, windo dị iche na-emeghe ebe ị ga-ahụ oge ole nnọkọ ahụ dịruru, lee ọnụ ọgụgụ nke oge a na-arụ na oge oge nnọkọ. E nwekwara mpaghara dị iche iche na iyi egwu na vidio ndị a ma ama.
N'oge egwuregwu ahụ, ịnwere ike ịza ozi na-abịa na netwọk mmekọrịta. Iji mee nke a, naanị ịkwesịrị ijikọ profaịlụ gị site na ntọala. E nwere ndị ozi a ma ama kachasị amara na netwọk mmekọrịta ndị mmadụ.
Ebe ngosi ebe ngosi
Na n'akụkụ aka nri nke ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ akara ngosi nke ngwa ahụ nke ị nwere ike ijikwa ihe omume ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịga ụlọ ahịa ahụ, malite egwuregwu ma ọ bụ pụọ na Nwunye. I nwekwara ike zoo Dock (Wijetị) ma ọ bụrụ na ọ na-emetụ ma ọ bụ na-adịghị mkpa n'oge ahụ.
Nkwado maka inwetakwu ozo maka otutu egwuregwu di egwu;
Ọnụnọ nke asụsụ Russian, ma ọ bụghị ihe niile a sụgharịrị;
Ọtụtụ plug-ins na skins;
Ihe omume ahụ bụ n'efu;
Mwepu na mwube na-agbanwe agbanwe.
Usoro ihe omume a chọrọ ọtụtụ ihe onwunwe kọmputa, nke a na-ahụkarị na ígwè na-adịghị ike;
A naghị ebudata ihe dị na ụlọ ahịa mgbe ịntanetị adịghị ike.
Overwolf - usoro bara uru maka ndị na-egwu egwuregwu, nke na-enye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ iji mee ka egwuregwu ahụ dị mfe. Otu nnukwu ntinye plug-ins ga-eme ka njiri egwuregwu dịkwuo elu.
Download nchikota maka n'efu
uPlay MCSkin3D Mmalite Esi edozi njehie na window.dll na-efu
Overwolf bụ usoro mmemme nke na-enyekwu ohere maka egwuregwu. Ọtụtụ nkwụnye plug na akpụkpọ anụ na ụlọ ahịa ahụ ga-enyere aka ime ka egwuregwu ahụ dị mfe karị.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP
Onye Mmepụta: Iko